Akhriso: Afar maamul-goboleed oo si wadajir ah u diiday Go’aankii Guddiga Xalinta Khilaafaadka | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Wararka Maanta Akhriso: Afar maamul-goboleed oo si wadajir ah u diiday Go’aankii ...
Akhriso: Afar maamul-goboleed oo si wadajir ah u diiday Go’aankii Guddiga Xalinta Khilaafaadka
HANNAANKA DOORASHADA DADBAN 2016
Maanta oo ay taariikhdu tahay 15 December, 2016 waxaa War Saxaafadeed Wadajir ah soo saaray Guddiyada Hirgelinta Doorashada ee Heer Dowlad-Goboleed oo kala ah Puntland, Galmudug, Koofur-Galbeed iyo Jubbaland. War saxaafadeedkan wuxuu ku saabsan yahay go’aanka GXKHD 14/12/2016 ee la doonayo in lagu hor-istaago kuraas loogu doortay deegaan doorashooyinka dalka si sharci ah.
Ugu horreyn waxaan madaxda MHQ, Shacabka Soomaaliyeed iyo Beesha Caalamkaba la wadaageynaa qodobbadan hoose:
GXKHD go’aankooda iyo habka dacwo qaadistuba ma waafaqsana Qodobka 14aad ee xilka iyo waajibaadka GXKHD oo dhigaya kulamada guddiga oo lagu dhageeysanayo dacwadaha waa inuu ahaado mid u furan dhinacyada ay khuseeyso, Goob-joogayasha caalamiga ah iyo kuwa gudaha. Haddabba maaddaama kulankii ay yeesheen GXKHD 14/12/2016 aan loo marin habraaca ku xusan qodobka 14aad ee xilka iyo waajibaadka GXKHD , taas waxay caddeyneysaa in ay gaareen go’aamo suuq madoow ah.
GXKHD iyo wakiilladoodu xiriir fiican lama laheyn Deegaan Doorashooyinka iyo Guddiyada Doorashada, waxayna caqabad ku noqdeen howlihii doorashada illaa ay meelaha qaar iskood uga baxeen.
GXKHD marka ay leeyihiin waxaan baarnay kuraas khilaaf ka jiro lama aysan xiriirin Guddiyada shaqada doorashada qabtay, mana aysan baarin dukumentiyada iyo hannaanka ay soo martay doorashadu, wakiillo uma joogin goobta shaqada qaarkood, mana aysan dhegeysan dhinacyada arrimahani quseeyaan oo dhan, IWM.
GXKHD waxaan ku wargelinay inaysan ku degdegin go’aannadaan oo burburin kara hannaanka doorashada, waxaana kula talinay in la sameeyo baaris dhab ah oo xaqiiq ku dhisan.
GXKHD Goaanka ay gaareen waxaan u arkeynaa inuu yahay mid lagu hor istaagayo xildhibaannada sida sharciga ah loo doortay si loogu cadaadiyo inay u hoggaansamaan fulinta ujeeddooyin siyaasadeed.
Sababahaan kor ku xusan awgood go’aanka GXKHD waa mid lagu degdegay oo xambaarsan ujeeddooyin siyaasadeed oo ay abaabulayaan musharraxiin awood dowladnimo haysta.
Haddaba, waxaan halkaan ku caddeyneynaa in go’aanka ay soo saareen Guddiga XKHD oo lagu burinayo doorashada ka dhacday Deegaan Doorashooyinka Soomaaliya uu yahay mid sharcidarro ah oo aan lagu dhaqmi doonin.
MHQ, Shacabka Soomaaliyeed iyo Beesha Caalamkaba waxaan ku wargelineynaa in doorashooyinka ka dhacay dalka 48 sanno kadib inay u dhaceen si dimoqraadi ah,xor ah oo xalaal ah. Natiijooyinka ka soo baxay doorashooyinkaasna in loo baabi’iyo si aan sharci loo marin waxay burburineysaa doorashada dadban ee 2016 taasoo dhammaanteed aheyd rajada kaliya ee Soomaaliya maanta sugeysay. Waxaana qaadi doona mas’uuliyadda cawaaqibka ka yimaada go’aankaan ciddii isku dayda inay hirgeliso wax aan sharci aheyn.
Guddoomiyayaasha Guddiyada GDGDD
Md Khaliif Awcali GDGHDD Dowlad-Goboleedka Puntland
Md Cabdi Cali Raage GDGHDD Dowlad-Goboleedka Jubbaland
Md Maxamed Cabdullahi Mursal GDGHDD Dowlad-Goboleedka Koofur Galbeed
Md Xuseen Sheikh Maxamed GDGHDD Dowlad-Goboleedka Galmudug
Previous articleDhaarinta xildhibaanada oo baaqatay iyo K/galbeed oo xildhibanadeeda ku amartay inaysan ka qayb-galin dhaarinta
Next articleQM iyo Guddiga xalinta khilaafaadka oo ku shiray Muqdisho